Muungab oo magaalada Ankara kula kulmay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Muungab oo magaalada Ankara kula kulmay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungab oo magaalada Ankara kula kulmay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga
By MAREEG on 19th December 2014
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa magaalada Ankara ee Caasimada ee dalka Turkiga kula kulmay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dalkaas Dr. Numan Kurtulmus.
Gudoomiye Muungaab ayaa kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii loo hormarin lahaa Caasimada Soomaaliya, waxaana uu uga mahad celiyay taageerada dhinacyada badan ee ay dowladda Turkigu siiso Soomaaliya.
Mr Muungaab ayaa sheegay in mashaariicda horumarineed ee uu Turkiga ka wado magaalada Muqdisho ay tahay dadaal wax ku ool leh, isla markaana ka dalbaday in la sii wado howlaha mashaariicda ee ka socda magaalada Muqdisho.
Duqa Muqdisho ayaa kala hadlay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka sidii loo fulin lahaa Mashruuc 10-KM oo dib loogu dhisi lahaa wadada wadnaha mashruucaas oo laga sugayay hay’adda TIKA oo horay ugu balan qaatay Guddoomiyaha gobolka banaadir mar uu safar ku tagay Ankara bishii Juun ee sanadkan.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga ayaa dhinaciisa soo dhoweeyay horumarka ay ku talaabsanayso Muqdisho, wuxuuna balan qaaday in Turkigu sii laba-laabayo taageerada ay siiyaan Soomaaliya, mar kastana ay garabtaagan yihiin Soomaaliya una ducaynayaan
Sidoo kale waxaa uu carabka ku dhiftay in mashruuca 10-kii KM ee dhismaha wadadda wadnaha la bilaabi doono isaga oo sheegay in uu arintaas kala hadli doono Hay’adda TIKA, iyadoo Ra’iisul Wasaare kuxigeenka uu yahay u qaabilsanaha Xukuumada Turkiga ee dhinacyada Hey’adaha dalkaas oo ay ka mid tahay TIKA.
Ugu dambeyn Gudoomiye Muungaab ayaa sheegay inay ka go’an tahay sidii uu uga mira dhalin lahaa dadaalkiisa ku aadan in Caasimada Muqdisho ay la mid noqoto caasimadaha kale ee caalamka.